माफिया र डनहरूको होईन जनताको... :: ज्योति देवकोटा :: Setopati
ज्योति देवकोटा र महेश नेपाली जुम्ला, साउन २
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत १९ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूले गरेको सत्याग्रहले एक दिन जनताको जित हुने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग पहिलोपटक भिडियोमा बोल्दै आफ्ना मागहरु सरकारले पुरा नगरेसम्म सत्याग्रह जारी रहने र एकदिन माफिया तथा डनहरुले हार्ने र जनताको स्वाभिमानले जित्ने बताएका हुन्।
‘जबसम्म मेरा माग पुरा हुँदैनन् तबसम्म मेरो सत्याग्रह जारी रहन्छ। यो मेरो लडाइ माफिया र डनहरूका विरूद्ध हो।’
जनताका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिमाथि सरकारले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले भने, ‘यो मलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार छैन। यो आन्दोलनमा जनताको जित हुन्छ र सर्वसत्तावादको हार,’ केसीले अगाडि भने,‘पार्टीका कार्यकर्तालाई हप्काएर तह लगाउन सकिन्छ तर जनतालाई सकिँदैन।’
असार १६ गते डा. गोविन्द केसी आफ्नो १५ औं सत्याग्रह सुरू गर्न जुम्ला आएका हुन्। पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजिरहेको बेला सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले डा. केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यतिवेलासम्म डा. केसीले सत्याग्रहको घोषणा गरेका थिएनन्। पछि प्रहरीले हिरासतमा लिएर राखेपछि उनले त्यहीबाटै सत्याग्रह घोषणा गरे।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह पढाई तत्काल सुरू हुनुपर्नेसहितका सात बुँदे माग राखेर केसी १९ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन्।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो दुई दिन यता बिग्रदै आएको प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा पुजन रोकायाले सेतोपाटीलाई बताए। ‘हिजो राति डा. केसीको मुटुको चालमा खराबी आएको थियो र रक्तचामा विगत एक साता यता अनियमितता हुँदै आइरहेको छ।’
डा. प्रविण कुमार गिरी नेतृत्वमा तीन जना चिकित्सक टोलीले हालसम्म डा. केसीको उपचार र रेखदेख गर्दै आइरहेका छन्। डा. केसीका सहयोगि किशोर केसीका अनुसार डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ। ‘डा केसीका नसा सुक्दै गइरहेका छन् र शरीर गल्दै गइरहेको छ। जतिखेर पनि अप्रिय घटना घट्न सक्छ,’ उनले भने।
यसअघि डा. केसीको सत्याग्रहलाई समर्थन गर्दै जुम्लामा संकलन गरिएको करिब पाँच हजार हस्ताक्षरसहितको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
त्यसैगरी साउन १ गते साउने संक्रान्तिको अवसर पारी कर्णालीमा प्रचलित लुतो फाल्ने दिनमा व्यंग्यात्मक रुपमा राँको (दियालो) बालेर ‘सरकारको लुतो जाओस र डा केसीको माग पुरा होस भनी' स्थानीयले साउने संक्रान्ति मनाएका थिए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २, २०७५, ०८:३७:००